Ny famaritana sy ny fahamendrehan'ny mpanao mari-trano Walrasian
Social Sciences Toekarena
Ny fijerena ny fahazoana ny fitoviana ankapobeny amin'ny tsena Walrasian
Ny mpanao varotra Walrasian dia mpanao tsena mpitrandraka mihintsy izay mifanandrify amin'ireo mpamatsy sy mpamaky mba hahazoana vola tokana ho an'ny fifaninanana tanteraka. Ny iray dia mihevitra fa toy izany ny mpivarotra tsena rehefa manamboatra tsenam-bola amin'ny vidiny tokana ahafahan'ny mpivarotra rehetra mihety.
Ny asan'i Léon Waltras
Mba hahatakatra ny andraikitra sy ny maha-zava-dehibe ny mpivarotra Walrasian amin'ny fianarana ny toekarena , dia tsy maintsy mahatakatra voalohany ny toe-javatra izay ahitana ny mpivarotra Walrasian: ny varotra Walrasian .
Ny endriky ny varotra Walrasian dia niseho voalohany ho toy ny famolavolana ny manam-pahaizana frantsay matematika Léon Walras. Ny Walras dia manan-daza eo amin'ny sehatry ny toekarena noho ny famolavolany ny lohahevitra momba ny hasarobidin-tsavony sy ny fampandrosoana ny hevi-bahoaka.
Ho setrin'ny olana iray izay mitarika an'i Walras amin'ny asa izay mety hivoatra amin'ny teoria amin'ny fitoviana amin'ny ankapobeny sy ny hevitry ny varotra na tsena Walrasian amin'ny farany. Walras dia nametraka ny famaha-olana iray natolotry ny filozofa frantsay sy matematika Antoine Augustin Cournot. Ny olana dia raha mbola azo atao ny manamarika fa ny vidiny dia mitovy amin'ny fametrahana sy fangatahana any amin'ny tsenan'ny tsirairay, tsy azo porofoina fa nisy ny fitoviana toy izany tany amin'ny tsena rehetra tamin'izany fotoana izany (fanjakana iray fantatra amin'ny anarana hoe alim-bahiny).
Tamin'ny alàlan'ny asany, i Walras dia namolavola rafi-dàlana mitovy, izay namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny hevitry ny varotra Walrasian.
Walrasian Auctions ary Auctioneers
Araka ny nampahafantarin'i Léon Walas, varotra varotra iray Walrasian dia karazana fivarotana simultaneous izay ahafahan'ny mpandraharaha ara-toe-karena na mpilalao sarimihetsika manombatombana ny fangatahana ny tsara amin'ny vidiny mety rehetra dia manolotra izany vaovao amin'ny mpivarotra izany. Amin'ny alalan'ity fampahalalana ity, ny mpivarotra Walrasian dia mametraka ny vidin'ny tsara mba hiantohana fa ny fitambarana dia mitovy amin'ny fangatahana manontolo amin'ny mpiasa rehetra.
Io famatsian-tena mifanaraka tsara io dia fantatra amin'ny hoe fitoviana, na ny fitoviana amin'ny ankapobeny raha misy ny fanjakana manerana ny firenena sy manerana ny tsena rehetra, fa tsy ny tsena ho an'ny tsara ihany.
Noho izany, ny varotra Walraziana dia olona mitantana ny varotra Walrasian izay mifanaraka tanteraka amin'ny famatsiana sy ny fangatahana mifototra amin'ny fanomezana omen'ny mpandraharaha ara-toekarena. Ny mpanao varotra toy izany dia manome ny fomba fitadiavana ny fahafaha-manararaotra ho an'ny fahafaha-manao ary tsy misy vidiny izay mahatonga ny fifaninanana tonga lafatra eo amin'ny tsena. Etsy an-kilany, ivelan'ny hetsika Walrasian, mety hisy "olana ara-pikarakarana" izay ahitana ny vidin'ny stochastic amin'ny fitadiavana mpiara-miasa amin'ny fifanakalozam-bola amin'ny saram miafina raha misy olona mifaninana aminy.
Ny iray amin'ireo fitsipika manan-danja amin'ny varotra Walrasian dia ny fandaminana ny varotra ao anatin'ny sehatra fampahalalana tanteraka sy feno. Ny fisian'ny fampahalalana tonga lafatra sy ny fandaniana amin'ny transaktion dia mamoaka ny hevitr'ilay tetikasa Walras amin'ny tâtonnement na ny fizotran'ny famaritana ny vidin'ny vidin-tsolika ho an'ny entam-barotra rehetra mba hahazoana antoka ny fitoviana amin'ny ankapobeny.
Ahoana no hamaritana ny sarany
Ny fampiasana ny fitaovam-pananahana amin'ny toekarena
Mianara manitsy araka ny tokony ho izy ny fitoviana mitovy amin'ny toekarena
Ny tsy fahampian'ny toekarena monopole
Ny fepetra mitohy
Ny fifandraisana eo amin'ny tolotra fifanakalozana sy ny vidin'ny varotra
Fampiasana ny valin'ny fizarana elastika
Ny Short Run vs. Long Run amin'ny Microeconomics
Inona no atao amin'ny fampiharana indraindray?
Mitadiava trondro maromaro amin'ny alàlan'ny alim-bary
Zava-bita manintona menaka: Manambara ny zava-miafina ny mpahaikanto
Irrealis 'Were (Grammar)
Famaritana ho an'ny besinimaro
Ny Feo Nashville, nohazavaina
Fifanakalozan-jaza, famolavolana sy fifaninanana
7 Angano momba ny mpamono olona
Inona avy ireo zavatra mahagaga eo amin'ny Volana?
Torohevitra momba ny fiarovana amin'ny vidin'ny kodiarana ampiasaina
5 Super PACs mba hiambina amin'ny hazakazaka ho filoham-pirenena 2016
Loharanom-pitaovana fakana loharanon-kevitra manokana 11
Famaritana ny anarana hoe DELUCA sy ny orinasa
Fepetra takiana ho an'ny trano ho an'ny Kongresy
Mpanjakavavy Isabella I ao Espaina
Proto-Cuneiform - Fahaefatra voalohany amin'ny asa soratry ny Planet Earth
4 Sinema notsongaina nataon'i George Lucas
Erntedankfest: Fisaorana any Alemana
Inona no dikan'ny tsipika marefo na làlan-jaza eny am-pandehanana?